Dowladda Soomaaliya oo ka laabatay kireynta qeyb ka mid ah Tiyaatarka – WARSOOR
Dowladda Soomaaliya oo ka laabatay kireynta qeyb ka mid ah Tiyaatarka
MUQDISHO — (WARSOOR) – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Cismaan Dubbe ayaa sheegay inuu hakiyey ijaarka iyo dib u hawl-gelinta maqaaxida Tiyaatarka isaga oo fulinaya amarka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Warqad kasoo baxday wasiirka bishii June, oo labadii malamood ee lasoo dhaafay soo shaac baxday, ayaa lagu sheegay in dhul ka mid ah tiyaatarka laga kireeyey shirkad gaar ah, si looga sameeyo maqaaxi.
Qoraalka uu maanta soo saaray wasiir Dubbe ayuu ku sheegay in go’aanka hakinta kireynta uu yimid kaddib markii qaar kamid ah Hal abuurka iyo fannaaniinta Qaranka ay ka keeneen cabasho.
Abwaanada Soomaaliyeed iyo fanaaniin ka tirsan hobollada qaranka ee Waabari oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay inay aad uga soo horjeedaan in la kireeyo qeyb ka mid ah Tiyaatarka.
Ra’iisul Wasaaraha XfS oo kulan la qaatay Midowga Musharaxiinta
Garoonka diyaaradaha Kabul oo gantaallo lagu weeraray